5 mmekọrịta Email Imewe ihe na-abawanye Pịa-Site Ọnụego | Martech Zone
Amaghị m na enwere ihe iwe karịa mmemme email ma hụ na ọ na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-edozi ndị niile na ndị ahịa email niile. Lọ ọrụ ahụ kwesịrị ịnwe ọkọlọtọ maka ịrụ ọrụ email dịka ha mechara na ihe nchọgharị. Ọ bụrụ na ị mepee ozi ọ bụla a haziri nke ọma, na-anabata ozi nke na-eleba anya na nyocha niile ị ga-ahụ usoro hodgepodge nke hacks iji mee ka ọ na-arụ ọrụ ma na-ele anya dị ka o kwere mee. Ma ọbụlagodi na ị ga-enwe onye debanyere aha ahụ site na iji onye ahịa ochie nke na-anaghị enye nkwado. Email nzuzo bụ nro.
Ma email bụ ihe dị otú ahụ irè ahịa ngwá ọrụ. Eziokwu ahụ bụ na atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa debanyere aha, na-akpọ gị ka ị zitere ha ozi - na oge gị - dị oke ike. Email na-aga n'ihu na ndepụta nke ọwa ahịa ahịa kachasị dị irè dị ka ọ dị kemgbe ihe karịrị afọ iri. Dabere na akụkọ sitere na Mailchimp:
73% nke ndị ahịa kwenyere na ahịa email bụ isi maka azụmaahịa ha.
60% nke ndị ahịa na-ekwu na email bụ ihe na-enye aka dị egwu nke ngwaahịa na ọrụ, na 42% nke ndị ahịa na 2014.
20% nke ndị na-ere ahịa na-ekwu na isi mmalite ego ha na-enweta na-emetụta arụmọrụ email.
74% nke ndị ahịa kwenyere na email na-emepụta ma ọ bụ rụpụta ROI n'ọdịnihu.
Mma ROI? Olee otú nke ahụ ga-esi kwe omume? Ọfọn, ewezuga ịhazi onwe na akpaaka, enwere ohere ịbawanye njikọ site na mmekọrịta mmekọrịta nke na-eme ka ịpị-ọnụego na nghọta dị ukwuu na ozi ịntanetị gị dị. Ndị mọnk Email na-enwe mmasị iche banyere email dị ka microsite mmekọrịta, dị na nkwụ aka gị site na ngwaọrụ mkpanaka gị. Ha enyela 5 mmekọrịta, ihe akwadoro na ihe omuma ha kacha ọhụrụ Email nlọghachi: Microsite dịnụ bụ Aha Ọhụrụ.
Menus - you maara na ị nwere ike zoo ma gosipụta menus site na iji CSS na email? Pịa Ebe a maka n'omume.
Ndị Accordian - Iji otu CSS ahụ maka zoo na igosipụta menu, ị nwekwara ike zoo ma gosipụta ọdịnaya, na-etinyekwu isi okwu gị n'echiche na ngwaọrụ mkpanaaka. Pịa Ebe a maka n'omume.
Ọkọ ma tụgharịa - Apple Mail na Thunderbird na-akwado mmekọrịta na hover, na-enye ohere iji nwayọ gosipụta ọdịnaya na email gị. Pịa Ebe a maka n'omume.
GIF nwere mmasị - Dabere na Email Institute, Animated #GIF #emails na-eme ka ọnụọgụ pịa-ruo 26% ma nwee ike iweli ọnụego ntụgharị site na 103%! Pịa Ebe a maka n'omume.
# Vidiyo ugbu a na-akwado ihe karịrị 50% nke ndị ahịa #email ma nwee ike ịbawanye ROI ruo 280% karịa ozi ịntanetị ọdịnala. Pịa Ebe a maka n'omume.
Pịa site na infographic iji nweta ụdị mmekọrịta!
Tags: animation gifemail email gifcodeemailemail kọntaktịemail accordion menuemail animation gifihe ntanetịemail menuemail ọkọ ma tụgharịaemail ọkọ tụgharịaihe mmekorita emailemail na-anabataọkọ ma tụgharịa
Gịnị bụ Predictive Marketing?